Kasịnụ Marketingzụ Ahịa Mgbe | Martech Zone
Wednesday, February 24, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Ewepụghị imewe: ụbụrụ
Mba, enweghi m ihe ire gi. Kama nke ahụ, achọrọ m ichetara gị otu eziokwu gbara ọkpụrụkpụ ị nwere ike ichefuola: na ngwa ọrụ kachasị ike maka ire ahịa gị nke ọma bụ nke ị nwere. Ọ bụ igwe kachasị elu nke ụwa - ụbụrụ gị.
Oku ka eji noggin nke gi bu nke anyi na anu oge obula. Ọ bụ ihe ndị nne na nna na ndị nkuzi na-agwa ụmụaka, ihe ndị njikwa na-enwe nkụda mmụọ na-agwa ndị ọrụ na ihe ndị ahịa iwe na-agwa ndị na-ere ha. Yabụ kedu ịdọ aka na ntị ochie iji chee echiche ga-enyere anyị aka na teknụzụ ahịa? Iji zaa ajụjụ ahụ, anyị ga-agaghachi n’ihe ndị bụ isi.
Gịnị bụ ahịa? Gịnị bụ Teknụzụ?
Ọ bụ ezie na Martech Zone jupụtara echiche dị mma iji meziwanye ahịa ịntanetị gị na ngwaahịa ndị dị ịtụnanya maka ịba ụba ntụgharị, enwebeghị mkparịta ụka nke ukwuu gbasara ihe mkpụrụokwu "ahịa" na "teknụzụ" n'ezie pụtara. Ide ederede gị bụ ụzọ dị mma iji chee nke ọma. Nke a bụ ihe m chere banyere okwu ndị a:
Marketing - Ndokwa nke ozi dị mkpa banyere ngwaahịa, ọrụ na ika gị na ndị na-ege ntị nwere ike ndị ahịa na ndị na-akwado ya.
Technology - Usoro nke sayensi na mgbagha n’usoro iji gaa systemic ndozi na arụpụtaghị.
Dị ka nkọwa ọ bụla, enwere echiche karịrị echiche ndị ahụ. Ma rịba ama nkebi ahịrịokwu m jiri: Ahịa gbasara ndokwa, ebe teknụzụ gbasara ngwa. Nke ahụ pụtara ịzụ ahịa bụ ihe ị ga - akpọkọta, corral na nwa bebi gaa ebe kwesịrị ekwesị, ebe teknụzụ dị karịa maka ijikọ ọnụ.
Dịka nkọwa m si dị, ndị Elekwasị anya nke ahia bu ihe di iche karie ihe omuma nke teknụzụ. Anyị kwesịrị iji ahịa dịka ụzọ iji ruo ndị ahịa na ndị nkwado aka. Mana teknụzụ ga-arụpụta ezigbo mmụba dị nhịahụ site na iji sistemụ.
Mgbe anyị tinyere okwu abụọ ahụ ọnụ, teknụzụ azụmaahịa ga-elekwasị anya na ndị na-ege ntị na hazi. Site n'echiche nke ahụ, ọtụtụ n'ime azụmaahịa anyị na-agbado anya. Site na ị rịba ama etu mmemme anyị si kwekọọ na nkọwa anyị, anyị nwere ike ịmara maka ihe kpatara mbọ teknụzụ azụmaahịa anyị nwere ike iji na-aga nke ọma ma ọ bụ daa.
Ezigbo usoro, ndị na-ege ntị na-ezighị ezi
You na-enyocha kaadị azụmahịa ọ bụla ị banyere n'ime nchekwa data ahịa email gị wee malite izipụ ha ozi ozugbo? Ọ bụrụ otu a, ọ pụtara na inwere usoro dị egwu maka ịhazi kaadị azụmaahịa. Ma m nzọ gị na-emeghe udu bụ ala na i nwere Ugboro unsubscribes. Nke ahụ bụ n'ihi na kaadị azụmahịa ọ bụla ị nwere ike inweta adịghị na-anọchite anya ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa gị. Na-eji nnukwu ngwá ọrụ mana gị na ndị ọjọọ.
Ndị na-ege ntị ziri ezi, enweghị usoro
You na-aga na ọkpụkpọ ahịa dị oke egwu na ndị nwere mmeri siri ike mana echefu ịgbaso? Ga-azụrịrị ahịa mara mma iji chọta ndị ahụ, ma ọ bụ site na ịkparịta ụka n',ntanet, mgbasa ozi ma ọ bụ isi mmalite ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ịnweghị ịnụ ọkụ n’obi banyere oku na-esote iji mechie azụmahịa ahụ, ị ​​nweghị usoro ahịa a pụrụ ịtụkwasị obi. Ndi ndu kachasi elu n’uwa abaghi ​​uru obula ma oburu n’enyeghi aka n’ezi.
Oge maka Pop Quiz
Nke a bụ ụfọdụ ọdịda na teknụzụ ahịa m nwetara na izu gara aga. Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara ha ji enwe nsogbu. Lee ma ị̀ ga-achọpụtali ihe nsogbu ahụ kpatara. (Họrọ ederede dị n'etiti [dị ka nke a] maka azịza ya.)
I nyefere ndị flyer maka ihe omume ị na-ekwu ugbu a, mana etinyeghị ebe a [ala tech ọdịda: gị mkpa a ndepụta maka eme akwụkwọ ọkwa]
I nyere m kaadị azụmahịa maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi weebụ gị na mba niile, mana adreesị email gị dị na Hotmail [ahịa ọdịda: ị chere na ndị na-ege gị ntị amaghị / na-eche banyere ezigbo ngalaba aha]
Otu ozi olu gị na-ajụ ajụjụ abụọ: Anụla m banyere ọrụ gị? Ma ọ bụ, abụ m onye otu onye nwere ajụjụ gbasara ya? [ahịa ọdịda: ị jikọtara mmadụ abụọ dị iche iche n'otu ahịa]
N’ime nnọkọ ịkparịta ụka n’ingntanet, ị na-ekwe nkwa izitere m ozi ma emechaa n’ụbọchị ahụ, mana edela ya ede. Anughi mgbe obula i nuru. teknụzụ ọdịda: ị nweghị ụkpụrụ maka akwụkwọ]
A kọrọ na Albert Einstein kwuru n'otu oge na "Nsogbu ndị anyị na-eche ihu enweghị ike ịgwọta site n'otu ụdị echiche ahụ kere ha." Ọ bụrụ n’ịchọrọ idozi nsogbu teknụzụ ịre ahịa gị, laghachi na isi mmalite iche echiche nke ọma. Nyochaa nkọwa gị. Chọpụta ihe ị na-emejọ ka ị nwee ike ịmalite ime ihe nke ọma.
Tags: teknụzụ kacha mmaụbụrụTechnology
Ọnọdụ Ise bara Uru na Ahịa ọ bụla
Feb 24, 2010 na 3:56 PM
Ọzọkwa mụ na Robby nwere nkwekọrịta na-adịghị ala ala.
Mgbe m gụrụ akwụkwọ ndị a, m na-echekarị otu m ga-esi jiri ha zụọ ahịa, na nke ọzọ
Mar 4, 2010 na 11: 46 PM
Nnukwu ọrụ na-eme ka anyị laghachi na isi!